Dil Sharafeedka Haweenka oo Kor u kacay Bakistaan | Gaaloos.com
Home » Layaab » Dil Sharafeedka Haweenka oo Kor u kacay Bakistaan
Dil Sharafeedka Haweenka oo Kor u kacay Bakistaan
Ugu dhawaan 1,100 haween ah ayaa ehelkoodu ugu dileen Bakistaan waxa loogu yeedho dil sharafeed iyaga oo aaminsan in ay sharaf rideen qoysaskooda.
Sida ay sheegtay komishanka madaxabannaan ee xuquuqalinsaanka Bakistaan sannadka waxa aad kor ugu kacey dilalka loogu yeedho dil sharafeedka ee inta badan ehelkoodu u geysto haweenka.
Warbixin sannadle ah oo komishanku soo saarey ayaa waxa uu ku sheegay in ka badan 900 oo hawwn ahi la kulmeen tacadiyo galmo xad gudub ah, islamarkaana 800 oo kale ay isku dayeen inay is dilaan amaba ay naftooda saheydeenba.
Sannadkii 2014 ilaa 1,000 haween ah ayaa lagu diley weeraro la xidhiidha dil sharafeedka waxa loogu yeedho iyaga oo qoysaskoodu u arkey in ay sharaf dileen magacoodii, halka laoogu geystay dil sharafeed 869 haween ah sannadkii 2013.
Waxa intaa dheer oo la sheegayaa kiisas badan oo noocan ah oo aan la soo werin in ay ka dhaceen Bakistaan.
Ra’iisulwasaare Nawaz Sharif ayaa sheegay in aanu islaamka mel ku laheyn dilka magaca qoyska lagu sharfayaa.
Warbixinti waxa ay intaa ku dartay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee sababay dilalakii dhacay 2015 ay ahaayeen muranno gudaha qoysaska ah iyada oo la sheego xidhiidho aaan sharci aheyn iyo xorriyada doorasho ee guurka.
Waxa ka mid ah kiisaska ugu cadcad ee la soo weriyay nin toogasho ku diley laba hablood oo uu dhaley isaga oo aaminsan in ay sameeyeen dhaqanxumo iyo sida kale saddex balood oo dhoorey ah oo uu diley ina adeerkooda isaga oo ku eedeeyay in ay magac dileen qoyskoodii.
Warbixintu waxa ay intaa raacisey in ay sida oo kale ka mid ahaayeen dadka ku baxay dil sharafeedka 88 nin sannadkii hore
Title: Dil Sharafeedka Haweenka oo Kor u kacay Bakistaan